इटहरी पाँच दिन शिल गर्ने निर्णय:: Mero Desh
इटहरी पाँच दिन शिल गर्ने निर्णय
Published on: ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०६:४५
इटहरी । इटहरीलाई पाँच दिन शिल गर्ने निर्णय भएको छ । इटहरी २ का एक युवामा कोरोना देखिए सँगै इटहरीका वडानम्बर २ लाई पाँच दिन शिल गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको हो । इटहरीका दुई वडा सँगै इटहरीमा औषधी पसल बाहेक सम्पूर्ण पसलहरुमा
बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । इटहरीका सुरक्षा संयन्त्र र उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु बीच भएको बैठकले इटहरीलाई पाँच दिन सम्म शिल गर्ने निर्णय गरेको इटहरी वडानम्बर ६ का वडाअध्यक्ष दिपक गौतमले बताए । इटहरी क्षेत्रका सम्पूर्ण बजारहरु बन्द रहनेछन । इटहरीभर सर्वसाधरणहरुलाई हिड्ने पाईने छैन । युवाका छरछिमेकी तथा उनका सम्पर्कमा आएकाहरुको आरडिटी टेष्ट गरिने छ । आवश्यकता अनुसार पिसिआर परिक्षण गर्ने सहमती भएको वडाअध्यक्ष गौतमले बताए ।
विराटनगर । प्रदेश १ मा मंगलबार ११ जना कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमित थपिएका छन् । झापाका ९ र सुनसरीका २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । झापाका ९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको कोशी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. संगीता मिश्राले पुष्टि गरिन् । उनीहरुको कोशी अस्पताल विराटनगरकै प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । उनीहरु झापाको केचनकवल गाउँपालिकाका हुन् ।
यहाँका एक युवकमा सोमबार कोरोना पुष्टि भएको थियो । संक्रमण भएका युवकको टोलका ३३ जनाको कोशी अस्पतालमा परीक्षण गर्दा थप ९ जनामा पोजेटिभ देखिएको हो । त्यस्तै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका दुईजनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।
प्रतिष्ठानका सहायक प्रवक्ता डा. अशोक ऐरले सोमबार राति १ बजे परीक्षण गर्दा २ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएका जानकारी दिए । कोरोना पोजेटिभ देखिनेमा इटहरीका १८ वर्षका युवक र अर्का व्यक्ति सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी हुन् । योसँगै सुनसरीमा मात्र कोरोना संक्रमितको संख्या तीन पुगेको छ । झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या १२ पुगेको छ भने प्रदेश १ मा संक्रमितको संख्या ५४ पुगेको छ ।